Ny herin'ny angon-drakitra ho an'ny fiaraha-mitantana fiaraha-monina ao Tanzania - Blue Ventures
Ny herin'ny angon-drakitra ho an'ny fiaraha-mitantana fiaraha-monina ao Tanzania
Desambra 10, 2021
Tantaran'ny fifandonana tsy hita maso Rehefa nanomboka niasa tamin'ny fiarovana an-dranomasina izahay tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, dia tonga saina haingana izahay fa ny angon-drakitra dia fitaovana tena ilaina hanampiana anay hahatakatra ny toetry ny jono sy ny tontolo iainana an-dranomasina. Nifantoka indrindra izahay […]
Vakio ny lahatsoratra feno: Ny herin'ny angon-drakitra ho an'ny fiaraha-mitantana fiaraha-monina ao Tanzania
Blog, Herin'ny angona
mpiara-fitantanana, fanangonana angona tarihin'ny fiaraha-monina, fanofanana data, fitantanana ny jono maharitra, Tanzania, ny herin'ny angona
Zarao amin'ny whatsapp
Nahazo ny loka IUCN Pathfinder i Tahiry Honko
Tatitra vaovao: Manimba ny vondrom-piarahamonina mpanjono asa tanana sy ny zavamananaina an-dranomasina ny trawling ambany
Mpanjono Darawa: Miala amin'ny jono manimba mba ho lasa mpitarika amin'ny fitantanana ny harena amorontsiraka
Ny forum COP dia manokatra indray ny adihevitra an-dranomasina Scots
Aretina miafina eto Madagasikara ve ny VIH?
Tsy afaka miandry isika hamaha ny krizy amin'ny toetr'andro
Nanomboka teto Madagasikara tamin'ny taona 2003 ny dian'ny Blue Ventures, ary nanohana ireo vondrom-piarahamonina amin'ny fiarovana ny ranomasina manerana ny firenena izahay hatramin'izay. Manana fandaharan’asa isam-paritra dimy izahay manerana ny morontsiraka andrefan’i Madagasikara, ary koa ny biraom-paritra ao amin’ny tanànan’i Toliara sy Ambanja. Eto Antananarivo Renivohitra no misy ny foibem-pirenena eto amintsika.
Eo amin'ny sehatra nasionaly, dia mamporisika ny tambajotra LMMA izahay MIHARI, izay mampivondrona fikambanana mpiara-miombon'antoka 25 amin'ny fanohanana ireo toerana LMMA 219 manerana ny firenena. Ny ekipa politikantsika koa dia mandray anjara mavitrika amin'ny fanentanana ny lalàna matanjaka kokoa mba hiarovana ny zo sy ny tombontsoan'ny vondrom-piarahamonina mpanjono, ary hanesorana ny jono indostrialy manimba amin'ny rano amoron-tsiraka.